Wonke umuntu uthanda izinto little cute. Cabanga indlela yokwenza Souvenir isikhova eyenziwe wawungathi. Job Description ukusiza ukwenza into yokuqala nje futhi ngokushesha.
izinguqulo ezihlukene eziyizikhumbuzo
On lokho kuyoba usayizi amathoyizi, incike ngenhloso. izikhova ezincane kakhulu eyenziwe wawungathi ingasetshenziswa njengendlela elengayo ocingweni. Futhi, umkhiqizo usayizi encane zivame ehlangene okhiye ngesimo a Fob ukhiye. Lezi zinto stylish kuzokwenza lezi zinto siqu lizwakale futhi ngokuqinisekile ngeke akuvumele ulahleke. Uma umkhiqizo yobukhulu medium, kungenzeka ukunikeza umuntu njengoba isikhumbuzo. yasekuqaleni kakhulu bheka ezihlukahlukene izilwane ezincane ku isihlahla sikaKhisimusi noma izimbiza izimbali. Kuwufanele okuthé xaxa ukuze ukhulise usayizi, futhi usuvele uthole ithoyizi ezithambile stylish. Kubalulekile ukwenza ngokunembile umsebenzi bese ugcwalisa umkhiqizo kunalokho ezinabantu egcwele ukugcina shape. Umphumela walokhu uyoba akunakwenzeka ukuba bakholelwe ukuthi wenza isikhova emangalisayo ngezandla zakhe aphume wawungathi nezinye izinto ezazikhona ekhaya, hhayi wathenga esitolo. Imodeli elikhulu eziyisikhumbuzo - ke ezihlalweni. Ukuze wenze lokhu, mane nje ukwandisa esibonelweni gizmos kancane usayizi oyifunayo bese bethunga umkhiqizo ngendlela evamile. Wokugcina ngokucubungula esiteji izoqeda umphetho Embossed.
Umkhiqizo imodeli ukukhetha
Kulesi sigaba kungenzeka ukukhombisa ukuthambekela kwawo zokudala ngokugcwele. Amaphupho futhi saqala izinto okutholakala kalula yezandla yasekuqaleni futhi eyingqayizivele. Ufuna ukwenza icala ngoba ifoni, bese umkhiqizo kungaba ngesimo emaphaketheni, ne ichopho. Hlela ukuhlobisa isihlahla sikaKhisimusi yezandla? Yenza ngobuningi izikhova, ayigcwalisa zokwenziwa ukupheda. ukubukeka Wonderful njengoba izinyoni ezincane njengengxenye ukwakheka ekwindla kusuka amaqabunga kanye ngezinto zemvelo. Ungase futhi "ahlale" on esikhashana isikhumbuzo ukhuni, isandla eyenziwe ubuhlalu noma origami isitayela. Njengoba ubona, konke kuncike kanjani mshini izosetshenziswa. Ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukuba ukhethe inhlanganisela efanele shades eziningana okuzokwenza naleli Ukwakheka jikelele. Ekuqaleni, zifezeke ekukhiqizeni izikebhe ezincane. Owl wenziwe wawungathi ngezandla zabo ngokushesha futhi kalula. Yini izinto ezikahle ukusebenzisa futhi kanjani ukusebenza igxathu negxathu? Lokhu uyofunda okwengeziwe kulesi sihloko.
Yiqiniso, besebenzisa ezihlukahlukene izinto ukukhiqiza imikhiqizo. Lokhu kungaba iphepha ezinzima, Indwangu obukhulu noma indwangu wathungela. Kodwa ake sibheke ukuthi yini edingekayo ukuze ukwakha isikhova encane eyenziwe wawungathi. Inkambo ngeke Ukunquma ezisele ngemuva abathungela neminye imikhiqizo. Thatha wawungathi ngemibala eziningana, Semi-esiqinile noma soft e isakhiwo sabo. Ngempela zidinga okungafani umthunzi nentambo ngokwanele oqinile. Kungcono ukuhanjwa lokuthunga Floss. Ekhuphuka nge imodeli, unakekele futhi ngalezi izesekeli ewusizo kakhulu kokuqeda njengoba amehlo "wangempela" plastic. Lezi zinto, ukuba ukuklanywa zezitho yangaphakathi ukuhambisa ngokukhululekile, ukusiza umkhiqizo babe ezikhangayo ikakhulukazi. Ngaphandle kwakho konke lokhu okungenhla, ungakhohlwa mayelana yamathebhu kwangaphakathi. In the ukungabikho izinto ezikhethekile, ezifana ukupheda-polyester, kungenziwa uthathe yizicucu amancane elidala besiyoba sikhulu izinto ababezenzile.
Izigaba ukusika isikhova kusukela wawungathi
Uma ungenalo isampuli edingekayo, kungenzeka ukudweba workpiece uqobo. Ukuze wenze lokhu, kuqala zama uqophe iphepha ifomu jikelele isikhumbuzo nge yonke imininingwane njengoba lizovela efomini esiphelele. Khona-ke uthumele ehlukile eyengeziwe yokuqedela izikhala - amaphiko, ikhanda, umlomo wenyoni, njll Ngokuvamile kuba ubukhulu encane isikhova wazizwa. Isibonelo yonke imininingwane yalesi sizathu kalula uvumelane on ambalwa amashidi esikoleni-notebook. Ungakopisha isithombe ngokuqondile qapha ikhompyutha, ukuphrinta ku iphrinta yakho. Uma kunesidingo, ushintshe amaphethini esikalini. Lapho imininingwane ukusika ukusebenzisa amaphetheni ku ucezu wawungathi nonhlangothi insipho noma ipensela elula. izibonelelo engeziwe akudingeki yaseZimbabwe.
preform Owl ka wazizwa cut efiselekayo sikelo abukhali. Phela uma inyunyana zonke izingxenye, onqenqemeni ngeke alunge, okungukuthi, asidingi umphetho impahla. I umphetho ngokuqondile phezu konqenqema, lathumba yaseZimbabwe hhayi ngaphezulu kuka 0.5 cm. Ekuqaleni ukuxhuma izingxenye zomzimba. Through ezincane imbobo yokugcwalisa umkhiqizo indwangu ukukhanya. Ngemva kwalokho, thina bamisa amaphiko, okuyinto nizenze ngokufanayo ivolumu. Ungakwazi balingise izimpaphe, abenze okungafani ngentambo parallel imidweshu yaseZimbabwe. amehlo Khona abaqeqeshiwe ngesimo isakhiwo emithathu ungqimba ekhanyayo inkinobho maphakathi unamathele esifubeni. Ekugcineni, ukuhlobisa Uqhwaku isikhova nezinsiza saqeda uhlobo izinhliziyo, izimbali noma namanye amaphethini kumnandi. Uma usebenzisa isikhova njengoba Fob ukhiye ungakhohlwa ukubophela loop phakathi ezindlebeni. Noma ungase unamathele phansi yezandla eside induku lamapulangwe ukufakwa ebhodweni imbali. A isikhumbuzo emangalisayo ngomumo!
AmaSu ukukhilosha izimbali izimbiza. izimbali ezinhle crocheted: incazelo
Umbazi elimnandi: isithombe nendlela yokubhekana
Isiqandisisi Leran: izibuyekezo, izici, izingcaca, ukubuyekezwa.